इटहरीका महिलाहरु आत्मनिर्भर बन्दै - Saptakoshionline
इटहरीका महिलाहरु आत्मनिर्भर बन्दै
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र २१, २०७५ समय: १०:०४:५६
इटहरी भदौ २१गते । ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरु घर गृहस्तीमै व्यस्त हुुन्छन् । तर हातमा सिप प्रदान गर्ने हो भने आत्मनिर्भर बन्न सक्ने महिलाहरुको भनाई छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सञ्चालन गरेको ३ महिने सिप सिके पछि केही गर्ने आँट पलाएको बताएका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा न. ३ मार्फत ३ महिने सिलाई कटाई तालिम लिएका ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरुलाई केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने आशा
पलाएको बताएका छन् । वडा कार्यलयको लगानीमा स्वरोजगार तालिम केन्द्रले महिलाहरुलाई सिलाई कटाईको तालिम दिएको थियो । ३ महिना सम्म पहिलो चरणको तालिमबाट चोलो, कुर्था सलवार, सर्ट, पाईन्ट लगायतका कपडा सिलाउन सक्ने भएको महिलाहरुले बताएका छन् । पहिलो चरणको तालिम लिएका २५ जना महिलाहरुलाई दक्षताको प्रमाण पत्र वितरण गरिएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले उनीहरुलाई प्रमाण पत्र वितरण गर्नुभयो । तालिम लिएपछि थोरै लगानीमा आफ्नै गाउँघरमा पसल सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको तालिम लिएकी यसोदा पाठकले बताउनुभयो ।
प्रशिक्षार्थी जस्तै बजारमा यस्ता सिलाई कटाईको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । दिन प्रतिदिन महिलाहरुको यसतर्फको आकर्षण बढ्दै गएको छ । थोरै लगानीमा बजारमा धेरै माग भएका सामानहरु तयार गरी विक्री बाट राम्रो आयआर्जन गर्न सकिने तालिमकी प्रशिक्षक भावना बजगाँईले बताउनुभयो ।
तालिम प्रति महिलाको आकर्षण र उनीहरुको सिप वृद्धि देखेर वडा कार्यालयले अझ थप दोस्रो चरणको तालिम पनि दिने योजना बनाएको वडा न. ३का वडा अध्यक्ष बालकृष्ण विष्टले जानकारी दिनुभयो । वडा कार्यलय र उपमहानगरले दोस्रो चरणमा थप महिलाहरुलाई सिप प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजारको माग अनुसारका तालिमहरु दिन सके ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरु पनि सिपसँगै आत्मनिर्भर हुने थिए ।